“’ဒုန်းကနဲဒိုင်းကနဲ ဘုံးကနဲ ဗိုင်းကနဲ မီးထွန်း ပွဲ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “’ဒုန်းကနဲဒိုင်းကနဲ ဘုံးကနဲ ဗိုင်းကနဲ မီးထွန်း ပွဲ”
“’ဒုန်းကနဲဒိုင်းကနဲ ဘုံးကနဲ ဗိုင်းကနဲ မီးထွန်း ပွဲ”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 28, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 17 comments
သီတင်းကျွတ်နားနီးပြီဆိုရင် ၈၄လမ်း ၄၀နဲ့၄၁လမ်းကြားမှာဗျောက်အိုးတွေမီးရှူး မီးပန်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေအလျိုလျိုနဲ့ပေါ်လာပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်ရောက်တယ် ဆိုရင် သတင်းစာထဲမှာ တီဗွီမှာ
ဗျောက်ဖောက်ရင် ဗျောက်ရောင်းရင် ဘာနဲ့ညာနဲ့ ဆိုပြီးကြေငြာတာကတော့ နှစ်တိုင်း လိုလိုတိုင်းဖတ်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လဲ ဘယ်လိုဘဲကြေငြာ ကြေငြာ ဘယ်လိုဘဲစည်းကမ်းတွေထုတ်ထုတ်
ဈေးချိုထဲကဆိုင်တွေကလဲ ဗျောက်အိုးတွေမီးရှူးမီးပန်းတွေကို စုဆောင်း
နှစ်စဉ်ရောင်းနေကျ ဗျောက်အိုးသည်တွေကလည်း ဗန်းလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ မန်းလေးမြို့လေးပြင်လေးရပ်မှာရောက်အလာ
လမ်းပေါ်မှာ တဗုံးဗုံး တဘိုင်းဘိုင်း တအုံးအုံးတဒိုင်းဒိုင်း နဲ့ဗျောက်ဖောက်သံတွေကလဲ ကြားနေရစမြဲ
ကလဲမြင်နေရမြဲ ဆိုတော့ အဲလို ကြေငြာလိုက်တာကိုက
“ ဗျောက်ရောင်းဘို့အချိန်ကြပါပြီခင်ဗျား “ အချက်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သလားလို့တောင်တွေးမိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က ရန်ကုန်ကလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကို စစ်ကိုင်းမင်းကွန်းဘက်တွေလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။
ညနေစောင်းရောက်တော့ တောင်သမန်အင်းကို ဆက်သွားပါတယ်။
တံတားပေါ်မှာလမ်းလျောက်နေရင်း အုန်းကနဲ့အသံကြီးကြားလိုက်ရပြီး တံတားအနောက်ဖက်ထိပ်နားကလဲ မီးခိုးလုံးကြီးတက်လာတော့ အတော်လေးလန့်သွားပါတယ်။
ဘေးနားကနေ တတွတ်တွတ်ပြောလို့ ဈေးလိုက်ရောင်းနေတဲ့ကလေးမလေးတွေက
“အဲတာ ဗျောက်အိုးဖောက်တာ ရယ်”လို့ပြောလိုက်မှ စိတ်အေးသွားပါတယ်။
အတော်လေးမှောင်လာတော့ ပြန်လာကြတဲ့အချိန်မှာတံတားအဆုံးနားအရောက် အုံးကနဲအသံကြီးထွက်လာတဲ့အခါ ကျနော့်ရှေ့က နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက် အတော်လေးကို
လန့်ဖျပ်သွားလို့ပါလာတဲ့အဖော်က တွဲခေါ်သွားရသလို ကျန်တဲ့ သူတွေကလဲ နှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီးအမြန်လျောက်ကြပါတော့တယ်။
လန့်မယ်ဆိုလဲလန့်လောက်ပါတယ် ဗျောက်သံက အတော်ကြီးကိုကျယ်ပါတယ်။
မီးခိုးတွေကလဲ လုံးထွက်နေပြီး ယမ်းညှော်နံ့ကလဲ တော်တော်နဲ့ကိုမပျယ်နိုင်လောက်အောင်ပြင်းပါတယ်။
အများပြည်သူအပန်းဖြေနေတဲ့ တံတားပေါ်ကိုလာပြီး ဗျောက်ဖောက်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်သိုက်ကတော့ သူများတွေလန့်သွားတာ ကိုကြည့်ပြီးတဟီးဟီး တဟားဟားနဲ့ ပျော်နေကြပါတယ်။
အခြားသူစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာကို ပျော်စရာလို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်
အဲလိုလူမျုိးရဲ့စိတ်ဓါတ်က လည်း အတော်လေးကို “အောက်တန်းကျ”နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့လုပ်နေတာကို တားမြစ်သူမရှိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူမရှိဆိုတော့
တံတားထိပ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ “နိုင်ငံခြားသားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ”ဆိုတဲ့
ညပိုင်းအပြင်ထွက်တော့လဲ ၈၄လမ်းတစ်လျောက်က ဗျောက်အိုးဆိုင်တွေမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ
၀ယ်ပြီးပြီးချင်းအဲဒီနားမှာတင်ဗျောက်တွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်းဖောက် မီးရှူးပန်းတွေတစ်ဖုန်းဖုန်းနဲ့လွှတ်နေကြသူတွေကလဲမနည်းပါဘူး။
နောက်မီးပန်းတစ်မျုိးကလွှတ်လိုက်ပြီဆိုရင် မီးပန်းကြီးကလည်ပြီး လမ်းပေါ်မှာလျောက်ပြေးပါတော့တယ်
အဲဒါကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေက လန့်ဖျပ်ပြီးရှောင်ကြပြုကြလုပ်ရတော့
အဲဒီနားကို ကျနော်ရောက်ချိန်က ညကိုးနာရီကျော်ကျော်လောက်ပါ။
ပလက်ဖောင်းနံဘေးမှာ ကောင်လေးတစ်သိုက်က ထိုင်ပြီး လမ်းပေါ်မှာ စက်ဘီး
ဆိုင်ကယ် စီးလာတဲ့ကောင်မလေးတွေကို ဗျောက်နဲ့လှမ်းလှမ်းပစ်။
ဗျောက်သံကြားလို့လန့်သွားရင် စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ် စက်ဘီး ဟန်ချက်ပျက်လို့ လဲမလို
တိုက်မလိုဖြစ်ရင် သူတို့က တ၀ါးဝါး တဟားဟား မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ရောက်နေသလိုပါဘဲ။
ညကိုးနာရီပါတ်ဝန်းကျင်အချိန်က မန်းလေးမြို့က စတိုးဆိုင်တွေစူပါမက်ကက်တွေ အလုပ်ဆင်းချိန်ဆိုတော့
လမ်းမပေါ်မှာ အလုပ်ကပြန်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေကို အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အချိန်လေးပါ။
ဒီအချိန်လေးကို တမင်စောင့်ပြီး အပျော်ဗျောက်ဖောက်လို့နှောင့်ယှက်ကြတာပါ။
အဲဒီထက်ဆိုးတာ က အိမ်ပေါ်ကနေပြီး မီးရှူးပန်းကိုအောက်စိုက်ဖောက်တာပါဘဲ။
အပေါ်ထောင်ဖောက်တယ်ဆိုရင် မီးပန်းက အပေါ်ခပ်မြင့်မြင့်တက်သွားတော့ မီးပွားတွေက
အောက်စိုက်ပြီး ဖောက်တော့ မီးပန်းတွေက မျက်စေ့ထဲမှာလင်းကနဲလက်ကနဲ။
မီးပွားကျလာမှာစိုးတော့ ဆိုင်ကယ်ကို အပြေးအလွှားမောင်းရပြန်ပါတယ်။
မနေ့ညကတော့ညပိုင်းကျနော်အပြင်ထွက်တော့ ဘုရားကြီးအောက်ကျင်းနားအရောက် အပေါ်ကနေ
ရှေ့တည့်တည့်ကို လင်းကနဲဗျောက်အိုးတစ်လုံးကျအလာ အုန်းကနဲ အသံထွက်လာတော့ ဆိုင်ကယ်ကို ရုတ်တရက်အရှိန်အလျော့လိုက် နောက်က ကပ်လိုက်လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ တိုက်မိမလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီး အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ထဲကို ကလေးတွေဝင်ပြေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။
မိဘက မသိတာလား သိပါရဲ့နဲ့မဆုံးမဘဲ ပေါက်လွတ်ပဲစား လွှတ် တာလားတော့မသိဘူး။
သူ့တို့အပျော်အတွက် သူများအသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာလောက်တောင်မစဉ်းစားနိုင်လောက်
အောင် စိတ်ဓါတ်တွေသိမ်ဖျင်းနေပြီ နိမ့်ကျနေပြီလို့ထင်မိပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်ရောက်တာနဲ့ ဆွေမျိုးထဲက သက်ကြီးဝါကြီးတွေ ဆရာသမားတွေကို လိုက်ကန့်တော့ကြမယ်။
(အခုခေတ်မှာတော့ သီတင်းကျွတ်ဆိုတာ ကိုအကြောင်းပြုလို့ စီးပွားရေးဈေးကွက်အတွက်
သီတင်းကျွတ်ကန့်တော့တယ်လို့ အမည်တပ်ပြီး အပေးအယူလုပ်ကြတာကတော့ လူတိုင်းအသိပါဘဲ။
ကျနော်တို့ကလေးဘ၀ကလဲ ဗျောက်ဖောက်ကြ မီးရှူးပန်းတွေလွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အသံကလဲ သိပ်မကျယ် တကယ်ကို ကလေးကစားစရာ။
အဲဒါကို အသံကျယ်ချင်တဲ့ကျနော်တို့က နို့ဆီခွက်ထဲကိုထည့်ဖောက်ကြပါတယ်။
အဲလောက်လေးလုပ်တာကို လူကြီးတွေမြင်ရင် အအော်ခံရ အဆူခံရပါတယ်။
မီးပန်းဆိုတာကလဲ (မဂ္ဂနီဆီယမ်အပြားသေးသေးလေး)ကို တုတ်ဖျားထိပ်မှာတပ်ထားလို့ မီးရှို့လိုက်ရင်
ညှော်စော်နံမယ် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မယ်ဆိုပြီး အာသာပြေရုံလောက်ဘဲကစားရတာပါ။
နောက်တော့ မီးထွန်းကားလေတွေး ယုန်ရုပ်ကလေးတွေဆွဲပြီး သီတင်းကျွတ်ရက်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီအချိန်ကလဲ လူနောက်များက ဗျောက်တွေကို လူစည်စည်မှာပစ်ပြီးဆော့ တတ်ကစားတတ်သူရှိပေမယ့်
1988 ခုနှစ်အလွန်မှာတော့ တရုပ်ပြည်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံမူ့ အရောင်းအ၀ယ်ဆက်ဆံမူ့က
ဒီယမ်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အတတ်ပညာဆိုတာ တရုပ်တွေက ရှေးကတည်းက ကျွမ်းကျင်ကြတာပါ။
တရုပ်ပြည်ဆိုတာက လဲမင်္ဂလာအခမ်းအနား ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှန်သမျှ ဗျောက်မပါရင် မပြီးသလောက်။
အဲတော့လဲ သီတင်းကျွတ်မတိုင်ခင်ကတည်းက တရုပ်ပြည်ဖြစ်အစွမ်းထက်လှတဲ့ဗျောက်တွေမီးပန်းတွေ
က မန်းလေးကို အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်လာပါတော့တယ်။
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုသစ် ပိုဆန်း ပိုလန်းတာတွေကို ကုန်သည်တွေက သွင်းလာကြပါတယ်။
ဗျောက်အိုးဆိုပြန်ရင်လဲ နားကွဲမတတ် နှလုံးရောဂါသည် လဲသေသွားလောက်အောက်အသံကျယ်တဲ့ဗျောက်၊
တစ်ဆင့်ကွဲ နှစ်ဆင့်ကွဲ သုံးဆင့်ကွဲတဲ့ဗျောက်၊
မီးရှို့ပြီးလွှတ်လိုက်တာနဲ့လေထဲမှာပျံဝဲပြီး တစ်ဆင်ပြီးတစ်ဆင့် တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ကွဲတဲ့ဗျောက်။
မြေပြင်မှာ ခြာလည်လည် ပြီး လမ်းလျောက်သွားသလို လျောက်ပြိး တဖုန်းဖုန်းနဲ့ကွဲတဲ့ဗျောက်
မီးပန်းဆိုပြန်ရင်လဲတုတ်တံအရှည်ကြီးတွေနဲ့လာကြ ဆယ်လုံးကွဲ ဆယ်ငါးလုံးကွဲ
ထွက်လာတဲ့ မီးပန်းပုံစံကလဲ အမျုိးစုံ မြင်ရတာကတော့တကယ်လှပါတယ်။
ဈေးကလဲ သေးတယ်မထင်ပါနဲ့ မီးပန်းတစ်ခုကို ရာဂဏန်းကနေထောင်ဂဏန်း
ကနေ သောင်းဂဏန်းထိ သူ့အဆင့်နဲ့သူရှိပါသတဲ့။
ဒါပေမယ့်လဲ လူတန်းစားမရွေးဝယ်လို့ ဗျောက်ဖောက် မီးပန်းလွှတ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
(ဒါတောင်မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေကို ဆင်းရဲမွဲတေတယ်လို့ နာမယ်တပ်ချင်သေးတယ်နော်။)
ဒီလိုအားပြင်းတဲ့ဗျောက်တွေနဲ့ ဆော့ကစားလို့ လက်အပူလောင်သူ
မျက်စေ့ ကွယ်တဲ့အထိ ထိခိုက်မိသူ
ဗျောက်ကိုရှောင်ရင်း ယာဉ်တိုက်မူ့ဖြစ်သူတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဖောက်လိုက်ကြတဲ့ဗျောက် လွှတ်လိုက်ကြတဲ့ မီးပန်းကြောင့်
ယမ်းခိုးယမ်းငွေ့တွေနဲ့ မွှန်ထူ ပြီး လေထုညစ်ညမ်းမူ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ
အဲတော့ ဗျောက်အိုးရောင်းတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးကြည့်မိပါတယ်။
“ကိုပေါက်ရေ ဖမ်းတော့လဲ ဖမ်းတာပေါ့။
ပေးပြီးကမ်းပြီး စားပြီးသောက်ပြီး ဖောက်ပြီး ကို သိန်းချီပြီးမြတ်တာကိုးဗျ၊
အဲတော့လဲ ဖမ်းကမှဖမ်း ရောင်းချင်တာပါဘဲ၊
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ စရောင်းရောင်းချင်း ဘန်းလိုက်သိမ်းခံရ ရင်တော့ အရင်းပြုတ်ပေါ့”
ကုန်သည်ကြီးကလဲ တရုတ်ပြည်က သယ်လာ
ပြန်ရောင်းတဲ့သူကလဲ ၀ယ်သူရှိ ရင်ရောင်းမှာဘဲ။
အဲ မရောင်းရ မဖောက်ရဆိုတာကိုမှ ကျုးလွန်သူတွေအပေါ်မှာ
တကယ်အကျိုးအမြတ်ရသွားသူက ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူနဲ့ တောင်းရမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေပါဘဲ။
ကျနော်တို့အပျော်အတွက် အမြတ်အစွန်းအကြီးဆုံးရသူကတော့ တရုပ်ပြည်က ဗျောက်အိုးမီးပန်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသူပါဘဲ။
မြန်မာပြည်က အရိုးကိုက် တရုပ်ပြည် ကအသားစားပေါ့။
ဗျောက်မဖောက်ရ ဗျောက်မရောင်းရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေထုတ်ရုံ
လိုက်ဖမ်းရုံနဲ့ ဒီကိစ္စ ပြီးမသွားပါဘူး။
မရိုးသားတဲ့ ၀န်ထမ်းကို စားပေါက်ထွင်ပေးသလို ဖြစ်သွားတာကတော့
၀င်လာတဲ့လမ်းကို မတားနိုင်ဘဲ အထဲရောက်မှ လိုက်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်
အဲတော့ ဖြစ်သင့်တာတစ်ခုကတော့ ဒီဗျောက်တွေ မီးပန်းတွေနဲ့ဆော့ကစားဘို့ကို တရားဝင်ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗျောက်ဖောက်ဘို့ မီးပန်းလွှတ်ဘို့နေရာကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။
မန်းလေးမှာဆိုရင် ကန်တော်ကြီး (တက်သိမ်းအင်း)မှာဆိုလဲလူနေအိမ်ခြေမရှိအကျယ်ကြီး
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနံဘေးက သဲသောင်ပြင်မှာဆိုရင်လဲ တပြန့်တပြော
ဖောက်ချင်တိုင်းဖောက်လွှတ်ချင်တိုင်းလွှတ် ဘယ်သူ့မှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။
ကိုရီးယားကားတွေမှာဆိုရင် မြစ်ကမ်းနံဘေးမှာ သဲသောင်ပြင်မှာ မီးပန်းလွှတ်တာမြင်ဘူးပါတယ်၊
မြို့ထဲမှာရောင်းရင် ဗျောက်ဖောက် မီးပန်းလွှတ်ရင်
မျက်နှာကြီးမျက်နှာငယ်မရွေးဘဲ လူတန်းစားမရွေးဘဲ တိတိကျကျ ပြတ်ပြတ်သားသား
ဒီလိုဗျောက်ဖောက် မီးပန်းလွှတ်ဘို့ နေရာသတ်မှတ်ပေးဘို့ဆိုတာက
“ဒုန်းကနဲဒိုင်းကနဲ ဘုံးကနဲ ဗိုင်းကနဲ မီးထွန်း ပွဲ”တွေလဲပပျောက်။
ပျော်ချင်သူများလဲ အားရပါးရ ဗျောက်ဖောက် မီးပန်းလွှတ်လို့ပျော်ကြ။
မြို့နဲ့ဝေးရာမှာသွားလုပ်တော့ မြို့လဲ အနံ့အသက်ကင်း။
ဗျောက်ဖောက်သံနဲ့ဝေးတော့ စိတ်အေးလက်အေး နေချင်သူများအတွက်လဲအဆင်ပြေ။
ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်ရောင်းသူဖောက်သူ လဲစိတ်ကျေနပ် နားအေးပါးအေးလိုက်ချင်သူလဲ
အင်း အဲလို့ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ၀င်ငွေတွေလျော့ပြီး စိတ်ဆင်းရဲမယ့်သူတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ်မယ့်။
အများနဲ့ လူတစ်စု ဘယ်သူ့ဘက်လိုက်မလဲဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာတောင်မလိုတဲ့ကိစ္စပါဗျာ။
မနေ့က 84-41လမ်းရောက်တော့ ခါတိုင်းလို မီးပန်းသည်ဗျောက်သည်တွေ မတွေ့ရတော့ တစ်ခုခုလိုနေသလိုဘဲဗျာ
ဗျောက်အိုးပညာကို ရန်ကုန်တရုပ်တန်းကလည်း ကျွမ်းပုံရပါတယ်
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ဖေါက်ခဲ့ ကြတာ ရန်ကုန်ဗျောက်ပါ။
အခုတော့ ဗုံးလောက်နီးပါးပြင်းထန်ပါတယ် ။ ရေထဲထည့် မှပေါက်တဲ့ 
ရေဗျောက် ဆိုတာလည်းရှိသေး။ မှတ်မိတာကတော့စက်ဘီးစပုတ်တိုင်
အခေါင်းထဲကို မီးခြစ်ဆံယမ်းတွေထည့် ပြီးဖေါက်ခဲ့ရတာပါပဲ ။
အစ်ကိုပြောသလိုပဲ အသံမကျယ်ပါဘူး ။ဝါးခြမ်းပြားကိုမြေကြီးမှာရိုက်သလောက်
အသံမြည်ရုံပါ ။ အခုတော့………..
ဖေါက်တဲ့ သူရော ရောင်းတဲ့ သူရော ကုန်သည်တွေပါ နည်းနည်းတော့ 
ဆင်ခြင်သင့် တယ်ထင်တာပဲ ။
လေးပေါက် အမှန်အတိုင်းပြောနေပါတယ်ဗျို့ ရွာ့ပြင်ထုတ်တာခံရဦးမယ်နော်………. :harr:
ဗျောက်အိုး ဆိုလို့ 
နောက်တစ်ခါ..ပစ်ထည့်တယ်..အုံးဆိုပေါက်ပြီး သူမဟုတ်သလို ခပ်တည်တည်ပဲဗျာ.
ထိုင်သောက်နေတဲ့အချိန် ဒီလိုလာလုပ်တော့ ဗျောက်အိုးဖောက်တဲ့ကောင်မျက်ခွက်ရယ် မြှောက်ပေးတဲ့ကောင်တွေရယ် အနီးဆုံးရှိတဲ့ အချွန်အတက်လက်နက်ရယ် ပဲ မျက်စိထဲမြင်နေတော့တယ်..
ဘယ်လောက်ပဲ ဆိတ်ဆိုးဆိုး သေစေနိုင်တဲ့လက်နက် တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးဘူးဗျာ..
ထိုးသတ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ ဆင်းစားတာ ကိုးဆယ့်ကိုးခါ
ထောင်ထဲ ၀င်ချင်ဘူးဆိုပြီး ဆင်းစားတာ အခါတစ်ရာ..
ဆိတ်ကို တစ်မဲအသာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီး ထောင်ထဲ ချီးပုံးထမ်းတဲ့ဘ၀က လွတ်သွားခဲ့တယ်..
ဗျောက်အိုးကြောင့် ခွေးမျိုးလဲသေ ငါလဲ ကားပြာစီးပြီး ချီးပုံးထမ်းရတော့မလို့ 
တကယ် လန့်စရာကောင်းတယ် လေးပေါက်ရယ်..အိမ်ထဲမှာနေနေလည်း အုန်းကနဲ..အုန်းကနဲ နဲ့ လန့်လန့်သွားတယ်… အပြင်ထွက်လည်း ရုပ်တည်သာနေရတာ ခပ်လန့်လန့်ရယ်… ဟိုနေ့ကများ ဆိုင်မှာမုန့်ထိုင်စားနေတာ စပယ်ယာက မီးပွိုင့်မိနေတော့ ယမ်းလုံးတွေဖောက်တယ်… ဘုကြည့်ကြည့်တာလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး…တစ်ခါတစ်ခါ လာလာစင်တယ်… လှည်းတန်းမှာ ရဲက ကင်းလာလှည့်တယ်တဲ့..သူက ဒီဘက်ရောက် ..ဟိုအနောက်ဘက်မှ ဗျောက်အိုးထဖောက်တယ်..ကဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…
ကိုပေါက်ပြောတာ လက်ခံပါတယ်ဗျာ.. အားလုံးလဲ အဲလို စိတ်ဓာတ်နဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန် နိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်.. ကိုယ်က အပျော်လုပ်ပေမယ့် ဖြစ်သွား နိုင်မယ့် အကျိူးဆက်တွေ က မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာ စဉ်းစား ကြစေချင်ပါတယ်..
အနော်ကတော့ ဗျောက်ကို ကြောက်တယ်.. ဖောက်ရမှာလဲကြောက်တယ်
အဲဒါကြောင့် ညဖက် ဘယ်မှမရောက် တော့ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လိုရှိလဲ မသိဘူးဗျ. ကန်တော်ကြီး ထဲမှာတော့ ညတိုင်း ဖောက်တဲ့ မီးရှုးတွေ ကတော့ တစ်ဒိန်းဒိန်းပဲ.. အဲလိုသတ်သတ်မှတ်မှတ် နေရာလး တွေမှာ ပျော် ကြတာကို ရင်တုန်စွာ အားပေးရင်း..
ဗဲရီးဂွတ်ပို့ စ် ပါ ကိုပေါက်
ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း ( လက်ခုတ်တီးသံ )
အုပ်ချုပ်သူလူကြီးတွေအတွက် အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အိုက်ဒီယာနဲ့ အပြုသဘောတွေကို ဖတ်ရှုခံစားလိုက်ရပါတယ်
ကျုပ် ၅တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းက ၊ အိမ်က အလုပ်သမားတွေကို ဗျောက်နဲ့ လိုက်ပစ်တော့ ၊ ဗျောက်က လက်ထဲမှာ ကွဲလို့၊ လက်မကြီးပြဲခဲ့ဖူးပါကြောင်း ၊ အဲဒါအဲဒါ..(ခရက်ဒစ်တူ သဂျီး) ကံအကျိုးပေးပေါ့
ကျမတော့ ကိုယ့်ရှေ့ ဗျောက်အိုးကျပြီးကွဲရင် သိပ်စိတ်ဆိုးမိတာပဲ။
ခပ်ဝေးဝေးက အသံတွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်းကြားနေရတာလည်း မကြိုက်ပါဘူး။
တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဒီဗျောက်အိုးတွက် ကုန်တဲ့ငွေ၊ယမ်းပေါက်လို့ သေတဲ့လူ ..နှမျောလိုက်ပါဘိ။
“’ဒုန်းကနဲဒိုင်းကနဲ ဘုံးကနဲ ဗိုင်းကနဲ မီးထွန်း ပွဲ” … ဒုန်းကနဲရော … ဒိုင်းကနဲရော … အုံးဒိုင်း စာဖတ်တာတောင် အသံကိုကြားသယောင်ယောင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်လှပြီ … နှလုံးရောဂါရှိတဲ့ လူကြီးတွေသူဆို လိပ်ပြာလွင့်သွားနိုင်တယ် … ကိုယ်လည်း ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဗျောက်အိုးအရမ်းဖောက်ချင်ခဲ့တာပဲ … ဒါပေမယ့် ပေသီးလေးနဲ့ပဲဆော့ခဲ့တာပါ … ( ဗြောက်အိုးမဖောက်ရဲလို့ အသံအကျယ်ကြီးကိုကြောက်လို့ ဆော့တော့ဆော့ချင်တယ် )
အခုကို ရန်ကုန်မှာတော့ ဗျောက်အိုးတွေ တော်တော် သောင်းကျန်းနေပါပြီ…။
သူများအထိတ်တလန့်/အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာကို အရသာခံပြီးပီတိဖြစ်တတ်တဲ့လူမျိုးကို ကျွန်တော်တော့ အထင်လဲသေးတယ်။ ရှုတ်ချတယ်။
ပြီးတော့ အသံဆိုတာ လူတဦးထဲ တစုထဲကို ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ…
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ၊ ကလေးသူငယ်တွေ ၊
နှလုံးရောဂါ အာရုံကြောရောဂါ ရှိသူတွေ
လတ်တလော မျက်စိ / နား ခွဲစိတ်မှု့ခံယူထားရသူတွေ
တရုတ်မင်္ဂလာဆောင်တို့ ပွဲလမ်းသဘင်တို့မှာဖေါက်တဲ့ ဗျောက်(အတွဲတွေ)က
မြန်မာလူငယ်တွေ သူများသွားလာတဲ့ကြားထဲ ပစ်ထည့်တဲ့ဗျောက်ကတော့
လေးပေါက်ရေရွှေကြည်ပြောချင်နေတာတွေ လေးပေါက်ပြောသွားတာပဲ။ ကျေးဇူးပါလေးပေါက်ရေ။
လေးလေး ဟိုက်လိုက်လုပ်ပေးသွားတာတွေ အကုန်ထောက်ခံပါတယ်။ ဦးဦးပါပြောသမျှကိုလည်းသဘောကျတယ်ဗျို့။
ဗျောက်ကို တအုံးအုံးဖောက်နေကြတာ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာများရောက်နေသလားထင်ရတယ်။
ညကြီးအချိန်မတော် လူကြီးသူမတွေအိပ်နေလားမစဉ်းစားဘူး အသိဥာဏ်တွေအောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေတယ်။
ဆောင်ပြီးနေတယ် စိတ်ကိုတင်းထားတာ အခုဗျောက်တွေကကျယ်လိုက်တာပြောမနေနဲ့ တခါတည်းအူးဗိုက်ပြောသလိုလုပ်ပစ်ချင်တယ်။
လေးပေါက်ရေ လေးပေါက်လည်း စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်ပဲ။
ရေးသွားလိုက်တာ ဟာကွက်ကို မရှိဘူး။
္တဗြောက်တွေက အရင်တုန်းကတော့ သာမန်ယမ်းစိမ်းတို့၊ကန့်တို့နဲ့လုပ်တာ။
ခုတော့ အဲဒီလို မဟုတ်တော့ဘူး။ ဓာတုဗေဒတွေနဲ့။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊
ပိုဆိုးတယ်) အက်စစ်ငွေ့တွ အများကြီးထွက်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုညစ်ညမ်း
ပြီး ရှုမိတဲ့လူတွေပါ အဆုတ်လေပြွန်ရောင်တာ၊မူးမေ့လဲတာတွေပါ ဖြစ်နိုင်တဲ့အထိ
အန္တရယ်ရှိတယ်။ နားစည်မြှေးပေါက်သွားနိုင်ပြီး အကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးတာမျိုးလည်း
ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျန်တာတွေက ရေးထားပြီးသားဆိုတော့။ ဒါကြောင့် ‘ဗြောက်’ ဆို
ဆိုလိုရင်းက လေးပေါက်ရေးတဲ့ အဓိကစာလုံး ‘ဗျောက်’ ဆိုတာက ပို့စ်တစ်ခုလုံး
စာလုံးပေါင်းမှားနေတယ်။ အမှန်က ‘ဗြောက်’ ပါ။
နှင်းနှင်းလည်း တစ်သက်လုံး ‘ဗျောက်’ လို့ပဲ မှတ်ထားတာပါ။ ‘ဗြောက်’ လို့သိတာ
အပေါ်က ‘ မြနန္ဒာ’ ဂျာနယ်ထဲမှာလည်း ဒုပိုဒ် လေးကြောင်းမြောက်မှာ ‘ဗျောက်’ လို့
မှားသုံးထားတာကလွဲပြီး တစ်ပုဒ်လုံး ‘ဗြောက်’ ပဲ သုံးထားပါတယ်။
ဂျာနယ်တွေကလည်း စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ မှားရိုက်တတ်တာ သိထားသမို့
ဒီဂဇက်က ‘သတ်ပုံကျမ်း’ မှာလည်း စစ်ဆေးကြည့်ပြီးပါပြီ။ ‘ဗြောက်’ ကလေးတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ စာလုံးပေါင်းမှန်မမှန် တန်းတွေ့နိုင်တဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့
စနစ်သစ်နဲ့ ‘သတ်ပုံကျမ်းအသစ်’ ဖြစ်နေပါပြီ။
၂၈ ရက်နေ့ကမှ Template အသစ်ပြင်ထားတာပါ။ vote လုပ်လို့ရလို့ ဦးဆုံးပဲ
ဒီဂဇက်မှ ” စာရေးကောင်းသူ ပညာရှင်များ ” မြန်မာစာသတ်ပုံ လွယ်ကူမှန်ကန်စွာ
လေးပေါက် မူရင်းက ဆောင်းပါး ၀တ္တု ကဗျာ အစုံရေးရင်းနဲ့ ရွာထဲမှာလူသိလာခဲ့တာပါ။
ကိုပေါက်လက်ဆောင် အတွေးစဉ်က ကဗျာ
ကိုပေါက်လက်ဆောင် အဆွေးပါးပါးလေးက ၀တ္တု အဲလိုနဲ့ရွာသားအဖြစ်ခံယူရင်း
မူရင်းဝါသနာက စာရေးစာဖတ်မို့ ကဲ ကိုပေါက်ရေ ဆက်သာရေးပေတော့ဗျာ။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကလည်း တောင်းဆိုရအောင် ကောင်းသကိုး။
အဲဒီမြို့လည်လမ်းမှာ.. အခုလို.. “ဒုန်းကနဲဒိုင်းကနဲ ဘုံးကနဲ ဗိုင်းကနဲ ဗြောက်ဖေါက်ကြည့်ရင်.. ဘာဖြစ်မလည်း တွေးမိတယ်..။
အုန်းဆိုတာနဲ့.. လန့်တတ်တဲ့သူတွေက.. ထခုန်မယ်..။
တချို့ကတော့ ..လက်တွေ့ကျကျ.. ဗြောက်ဖေါက်သူကို.. သွားရန်ရှာမယ်သေချာမိတယ်..။
ဒေါသကြီးတဲ့သူက.. လက်လွန်ပြီး.. သေနတ်နဲ့ထုတ်ပစ်.. သတ်ချင်သတ်မပေါ့..။
.. နောက်တမျိုးက.. “ဒုန်းကနဲဒိုင်းကနဲ့ဆိုတာနဲ့”.. “ဘုန်း”ဆို.. ရောက်တဲ့နေရာ.. ပစ်လှဲချမယ့်အမျိုး..။
ရင်ဘတ်ကလေး”ဖိ”..” နှလုံးကထိ”သွားပါတယ်ဆိုပြီး.. အရေးပေါ်ကားခေါ်မယ့်သူတွေပေါ့..။ အသက်ကြီးကြီး ဘွားဘွားသာအဲလိုလုပ်ရင်.. ဗြောက်ဖေါက်သူခမြာသေပြီဆရာပဲ..။
အနည်းဆုံးတော့..ဘွားဘွားတို့ခမြာ… သူ့ခန္တာကိုယ်ကို.. အခမဲ့ဆေးစစ်ခွင့်ရသွားမှာသေချာပါတယ်…။
.. ပိုက်ဆံတောင်းစားနေရရှာတဲ့..သက်ကြီးရွယ်အိုဖွားဖွားများကို.. ပစ်လှဲချဖို့.. တိုက်တွန်းပြီး.. လုပ်ခိုင်းစေလိုကြောင်း..။